SAWIRRO: Xulka Jarmanka oo dayuurad loogu keenay kabo casri ah! (Laacibiinta & noocyada ay xiran doonaan) – Gool FM
on May 25, 2016 in Ascona, Switzerland.
(Zurich) 02 Juunyo 2016 – Laacibiinta xulka Jarmanka ee Mesut Özil, Thomas Müller, Mats Hummels, Manuel Neuer iyo Bastian Schweinsteiger ayaa kabahooda ka helay hawada kaddib markii ay dayuurad nooca qumaatiga u kaca ihi ay keentay kabaha ay ku ciyaari doonaan ee ay farsamayso sharikadda Adidas.
Xulka Jarmanka oo haatan ku sugan xeradooda tababarka oo ku taalla dalka Switzerland ayaa waxay laacibiintani heleen kabaha cusub gaar ahaan dufcadda Mercury Pack, oo ah kabo bandhig ahaan hufan.
Inta uu socdo Koobka Qaramada Yurub Thomas Müller ayaa xiran doona X16 + PURECHAOS, Bastian Schweinsteiger, ayaa isagu qaadan doona X16, halka Mesut Özil, uu ciyaarta ku koontarooli doono ACE 16+ PURECONTROL, ugu dambaynna Mats Hummels iyo Manuel Neuer ayaa qaadan doona nooca ACE 16 .
Xiddigahan Jarmanka ayaa kabahan Mercury Pack, markii ugu horreeysey ku adeegsan doona ciyaarta sxbtinimo ee ay Hungary la yeelan doonaan Juun 4.
TOOS u daawo: Italy U21 vs France U21 - LIVE